Car 2104, empeleni enze Tuning bebodwa, bayindlala kakhulu emakethe yasekhaya. Nge yesondlo efanele futhi usebenza ngendlela efanele umshini izosebenza thembeke isikhathi eside futhi imishini evamile. Nokho, abanikazi abaningi bazimisele ukuhlela ingaphakathi okukhethekile imoto, kanye ukuthuthukisa ukusebenza kanye traction izici. Cabanga ukuthi kungenzeka ngcono lokhu brand.
Model 2104, okuyinto Tuning ngokuvamile okuhloswe ngaso ngcono umzimba, ngale ndlela ingashintshwa ngezindlela ezintathu:
Easy retrofit - ezenziwe esikhundleni kurediyetha grilles, ubuncane ukufakwa umzimba ungakuphi, amasondo ahamba namarimu konke ingilazi anombala.
Tuning Isilinganiso kuhilela ukufakwa yokukhanya entsha, izibambo nesihluthu, kanye umzimba kit bese imishini isicelo egcwele yesifutho sopende.
intuthuko Deep iwukuba rework the bodywork, ne ushintsho imvume iminyango, ophahleni ongaphakeme.
Imagination, nobuciko kanye kancane wekhono uyonika imodeli Okuqukethwe akuzwakali 2104, okuyinto enze Tuning akunzima, uhlobo izimoto high-class. Ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe umdwebo bese umzimba wokucwebezelisa. Ukufakwa vintage hubcaps futhi-chrome ifaka umphelelisi obunobunye jikelele isithombe ukuthuthukiswa Ingaphandle.
Understate salon ngamasentimitha ambalwa kungenzeka ukusika Racks ngesikhathi esifanayo kokululungisa bumper elementi ukukhanya ezingemuva by. Nge indlela okunekhono, lesi sisombululo ngeke kakhulu ukushintsha ukubukeka emotweni. Nokho, qaphela ukuthi uphahla ongaphakeme kuyodingeka ukujwayela kokwehla.
Series 2104: Interior Tuning
Uma dolobha ehloselwe ekuguqulweni wezangaphakathi, esikhundleni amasondo ayo, shift ikhanda. Lapho ekhetha booster, kudingeka ucabangele kwedivayisi yayo nge imoto samanje. Uma kungenjalo, ungase uthole nomphumela ophambene, kubathinta kabi imingcele ethile yezobuchwepheshe ngalobu buciko.
Ngokuvamile e sezingcweti gumbi ukushintsha izihlalo futhi Ukunquma. Ngenhlanhla, ukuthola analogue of eliphezulu izinto zanamuhla ngempela ngempela. Akunjalo ngempela ukuyisebenzisa njenge lesikhumba Upholstery, ngoba akuyona ezishibhile. Kuyinto esikhundleni efanelekayo noma velor. Fans of ezemidlalo isitayela ungabeka izihlalo elifanele kokwehla fixed kanye amabhande ezikubambayo.
Futhi kule Tuning gumbi ngezandla zakhe (2104) empeleni athathe indawo ukukhanya izakhi. Thuthukisa ukukhanyisa ingaphakathi kusiza yomiselela insimbi panel diodes ukukhanya-likhipha, kanye ukufakwa izakhi ezifanayo iminyango, izibani zokukhanyisa. In the version zakudala uthuthukiswe amapayipi zihlanganisa esikhundleni okhaphethi, umnyango panel kanye uphahla kuphela.
Ungakhohlwa mayelana sesimanje namandla iyunithi yakho "ezine". Silungisa 2104, izithombe zazo lapha ngenzansi, kulokhu zingenziwa ngezindlela ezimbili. Ku-samuntu inkimbinkimbi, wazalela isilinda, ngokwenza kanjalo wandise ivolumu displacement motor. It kwandisa torque esiphezulu.
Eyesibili indlela sihlotshaniswa ukwanda izakhi unhlangothi piston. Udinga ukukhetha ilungelo izinduku ezintsha nokuxhuma esikhundleni crankshaft. umsebenzi okunjalo kungcono ishiyelwe ochwepheshe. Imoto ethuthukisiwe kuyoba nzima ukugcina endleleni emva inzuzo amandla injini. Ukuze ugweme izikhathi ezingemnandi ezinjalo kufanele zithuthukiswe ukumiswa. Inketho engcono kungaba ukufakwa kohlelo ezemidlalo, okuyinto kuncike ukulungiswa. ukumiswa stiffer futhi ngakhula phansi imvume kuzovumela ukulawula kangcono imoto endleleni nge ukwanda ngesikhathi esisodwa ngesivinini esiphezulu.
Brake and qeda uhlelo
Ukuphakelwa kokukhwehlela engeyokuqala ukuze "ezine" kungenziwa ngcono ngoku esikhundleni okokunciphisa umsindo ku kukho kanye-ngokusebenzisa futhi zero lemifanekiso air umhlangano, kanye "isicabucabu" uhlobo ezemidlalo qeda ezininginingi.
Entsha uhlelo unyathela amabhuleki uyokhulisa ukuphepha ukunyakaza. Kwanele esikhundleni izakhi sigubhu iyashelela futhi ebucayi iyunithi nge akwazi ukugcina umoya usayizi nantathu amayintshi.
Yini enye eningayenza ukushintsha?
Kungenjalo Vaz-2104, eziningi zazo Tuning wenziwa ngokuzimela, kungaba mfushane.
umzimba ngokunqunywa kwenza umshini kakade abangekho besiyoba sikhulu ukuwuqondisa runabout, lapho bonke izindlela emincane kanye isiminyaminya azikufanelekeli. Njengoba ukuhlolwa, ezinye izingcweti baphathe isondo eliyisipele on the lid umthwalo gumbi engangikulo. Inqubo ngokwayo kunciphisa imoto siqukethe izinyathelo eziyisisekelo ezimbalwa:
Ukuphuca ingxenye gumbi umgibeli.
Ukunciphisa obuphelele bendiza kushaft.
Eshintsha izintambo zikagesi, ukubopha uhlelo.
Painting kanye ezipholisha we wobuciko okuholela.
Ngamagama esisebenzayo, ukwehla ubude imoto ngaphansi ukucatshangelwa kuzovumela brand ukulondoloza okuncane ku petrol kanti yangaphandle amandla ukuguqulwa ukumangala futhi sithokozise abasebenzisi eziningi zomgwaqo agobhoze.
Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ubuyekeze yokukhanya we "quartet", esikhundleni salo kube nokuthile Xenon ilensi LED "izingelosi" supply. Little "conjured" phezu ukuma isiqu, empeleni zanda mfushane ezingemuva ukubopha izibani, ngokuvumelana uhlobo izimoto American. Ukuze kuncishiswe elibi nenqwaba umzimba futhi sandise umsungulo inkambo kuzovumela emoyeni isiguqo efakiwe engxenyeni engaphakathi entwasahlobo. Umsebenzi izakhi efanayo njengoba e imishini esezingeni izimoto.
Domestic imoto Vaz-2104, lapho Tuning zamabutho ka iningi abashayeli, ungaguqula ngale ukuqashelwa. Ingaphakathi understated, Upholstery entsha, umzimba ungakuphi, esikhululekile izakhi ukukhanya yesifutho sopende - kungcono ingxenye nje izindlela sendlela yokuthuthukisa imoto yakhona.
Ayinangozi uyokhulisa injini, ngokufaka esikhundleni ke ngenguqulo namandla kakhulu noma esebenzisa wazalela isilinda, nokuqinisa inhlangano ukumiswa. Kungenjalo, entwasahlobo lingasethwa "iVolga" noma "Niwa" ezivumela unethemba unqobe emgwaqeni ezifuywayo, ikakhulukazi ezindaweni nge emigodini futhi imigodi. Ngeso lengqondo futhi efanele, uyokwenza kusukela "quartet" wobuciko real futhi eyingqayizivele.
Isondo Ingxubevange - ngobuhle nangobubi bawo
Ubudlelwane School: ukhuluma ngani ngokuyanga na?
Uhlaziya ngesikhathi sokukhulelwa: uhlu ngamasonto. Ukuhlolwa kwe-Ultrasound, igazi kanye nomchamo